Shoutcart: Nzira Yakareruka Yekutenga Kushevedzera Kubva kuSocial Media Influencers | Martech Zone
Zviteshi zvedhijitari zvinoramba zvichikura nekukurumidza, dambudziko kune vatengesi kwese kwese pavanosarudza zvekusimudzira uye kupi kwekusimudzira zvigadzirwa nemasevhisi avo online. Sezvo iwe uchitarisa kusvika kune vateereri vatsva, kune echinyakare dhijitari chiteshi senge indasitiri zvinyorwa uye mhinduro dzekutsvaga… asi kune zvakare inopisa.
Kushambadzira kweInfluencer kuri kuramba kuchikura mukuzivikanwa nekuti vapesvedzera vakanyatsokura uye kudzora vateereri vavo nevateveri nekufamba kwenguva. Vateereri vavo vakakura vachivimba navo uye zvigadzirwa zvavanounza patafura. Izvo hazvisi zvisina kunaka kwayo, zvakadaro.
zhinji inopisa vanongova vanhu vane vateveri vakawanda… asi havawanzova nesimba muhuwandu hwavo. Ndaizviisa muchikamu ichocho. Ndichiri nekutevera kwakakura, vateveri vangu vanoona kuti ndiri kuratidza mapuratifomu kwavari kuitira kuti vakwanise kuwedzera tsvagiridzo uye vaone kana yakakodzera. Nekuda kweizvozvo, ini ndinogona kuwana akawanda mabhatani kune anotsigira kana affiliate link… asi kwete hazvo kutenga. Ini zvakanaka nazvo, uye ndinowanzo kutarisana nevashambadzi vanouya kwandiri kuti vapesvedzerere kushambadzira kushambadzira.
Kune zvakawanda zve kushambadzira kushambadzira mapuratifomu kunze uko, mazhinji acho akaomesesa nemaapplication emushandirapamwe, humbowo hweanalytics, tracking links, etc. Semunhu anofurira, ndinowanzo svetuka zvikumbiro izvi nekuti nguva yazvinoda kunyorera nekushanda nekambani haina kukodzera mari yavanotambira. vari kupa mushandirapamwe unobudirira. Shoutcart zvakatopesana… ingotsvaga vanofurira, bhadhara mari yako, uye tarisa zvawanikwa. Shoutcart inopa zvinotevera maficha uye mabhenefiti:
Scalable Campaign - Shoutcart inopa kugona kuodha kusheedzera kubva kune akawanda anopesvedzera kamwechete. Tenga kusheedzera kwakaderera semadhora mashoma, uye kumusoro kwemadhora gumi panguva.
Muteveri Demographics -Sefa vateveri nemutauro, nyika, zera, bonde uye murume kana mukadzi zvichikutendera kuti usarudze vanofurira nevanotevera zvinoenderana nevateereri vako.
Tracking uye Metrics -Post tracking uye manhamba anowanikwa kune ese macampaign, nyatso tsvaga kuti ndeipi inopesvedzera inounza yakanyanya ROI, uye usatambise bhajeti rako.
Yakakura Bang yeBuck yako -Influencer kushambadzira haina kudhura uye ndeyechokwadi kupfuura dzechinyakare nzvimbo! Unogona kutanga paShoutcart nemadhora gumi chete!
Daily Audits - Shoutcart Ongorora vapesvedzera vedu mazuva ese kuti iwe ugone kuve neruzivo rwakajeka rwekuti waunoshanda naye kuti uwedzere mhedzisiro!
Shoutcart inosanganisira vanofurira kubva ku Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, uye Facebook.
Maitiro Ekutangisa Yako Yekutanga Shoutcart Campaign
Hapana chikonzero chekutengesa mafoni uye zvibvumirano, Shoutcart inonyanya chitoro chepamhepo chekutenga influencer shoutouts. Heino maitiro ekutanga:
Tsvaga Vanokukanganisa - Bhurawuza kuburikidza nezviuru zvevapesvedzera paSoutcart, wobva watora mashoma anoenderana niche yako kana kupa. Iwe unogona kusarudza nechikamu, saizi yevateereri, nhamba yevateveri kana kungotsvaga nekiyi izwi.
Wedzera yekutengera -Mushure mekutora vakanyanya kukurudzira, vawedzere kungoro yako uye tanga kugadzira odha!
Gadzira Yako Order -Zadza fomu rakapfava uye rodha mufananidzo / vhidhiyo kune vanofurira kutumira. Sanganisira zita rako rekushandisa kana chinongedzo mune zvinyorwa zvekurongeka, kuti vataridzi vazive masvikire ako.
Ronga uye Pay -Sarudza nguva yako yaunofarira yekusheedzera, uye bhadhara iyo yekurongeka. Bvumira anosvika maawa makumi manomwe nemaviri evapesvedzera kuti vaburitse odha yako asi usazvinetse, vanofurira havazotumire nguva yako yaunoda isati yasvika.
Gamuchira Exposure -Mushure mekudaidzira kwako kubhadharwa uye kurongwa, iwe unogashira iyo posvo kubva kune vanofurira vawasarudza! Zviri nyore!
Bhurawuza Influencers pa Shoutcart
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Shoutcart uye zvakare anofurira pane network yavo.
Tags: buy influencer marketing campaignsbuy shoutoutstenga zvinyorwa zvesocial mediaFacebookfacebook influencersinfluencer marekting campaignskushambadzira kushambadzirainfluencer kushambadzira chikuvaInstagraminstagram influencersshoutcarttiktok vanokurudziraTwitterYouTubeyoutube influencers